आउँदो मंसिर ३ गते चन्द्रग्रहण, नेपालमा नदेखिने चन्द्रग्रहण कसरी हेर्ने ? - Sudurpaschim Online
by सुदूरपश्चिम अनलाइन November 13, 2021 November 13, 2021
आउँदो मंसिर ३ गते, १९ नोभेम्बर २०२१ मा लाग्दैछ। यो आंशिक चन्द्रग्रहण हुनेछ। नासाका अनुसार यो आंशिक चन्द्रग्रहण नोभेम्बर १८ र १९ को मध्यरातमा लाग्नेछ, जब चन्द्रमा पृथ्वीको छायामा केही घण्टा ढाकिनेछ। यो तपाइँको समय क्षेत्र मा निर्भर गर्दछ, यो त्यहाँ कति समय हुनेछ।
नेपालमा आंशिक चन्द्रग्रहण नोभेम्बर १९ मा दिउँसो १:०३ बजेबाट सुरु भएर साँझ ४:३२ बजेसम्म लाग्ने छ ।
यो आंशिक चन्द्रग्रहण हुनेछ, जुन भारतका केही उत्तरपूर्वी भागहरूमा देखिनेछ। यो अरुणाचल प्रदेश र असमका केही भागहरूमा देख्न सकिन्छ। यस बाहेक यो उत्तर र दक्षिण अमेरिका, पूर्वी एसिया, अष्ट्रेलिया र प्रशान्त क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ।
अमेरिकाको पूर्वी तटमा आंशिक चन्द्रग्रहण राति २ बजेपछि सुरु हुनेछ, बिहान ४ बजे चरममा पुग्नेछ। जबकि पश्चिमी तटमा, यो राती ११ बजेपछि सुरु हुनेछ र राति १ बजे समाप्त हुनेछ ।
यो चन्द्रग्रहण घरबाट हेर्न नपाउनेहरुले नासाको लाइभ स्ट्रिममा हेर्न सकिने छ ।
चन्द्रग्रहण कसरी लाग्छ ?
सूर्यको परिक्रमा गर्दा पृथ्वी चन्द्रमा र सूर्यको बीचमा यसरी आउँछ कि चन्द्रमा पृथ्वीको छायाबाट लुकेको हुन्छ। यो तब मात्र सम्भव छ जब सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा एक अर्कासँग ठ्याक्कै आफ्नो कक्षामा छन् ।
जब पूर्णिमाको दिन पृथ्वी सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा आउँछ, त्यसको छाया चन्द्रमामा पर्छ। जसका कारण चन्द्रमाको छायाँ भागमा अँध्यारो रहन्छ । र यस अवस्थामा, जब हामी पृथ्वीबाट चन्द्रमा हेर्छौं, त्यो भाग हामीलाई कालो देखिन्छ। त्यसैले यसलाई चन्द्रग्रहण भनिन्छ ।
Previous अब नेटफ्लिक्समा रिलिज हुँदैछ सूर्यवंशी
Next भारतको राजधानी दिल्लीमा प्रदूषण बढ्दै गएपछि एक हप्ताका लागि स्कुल बन्द